Isizinda se-Ultrasonic Sama-Mushrooms Wokwelapha - I-Hielscher Ultrasound Technology
Amakhowe wezokwelapha ayaziwa kusukela ezikhathini zasendulo ngezinzuzo zabo zezempilo ezihlukile. Muva nje, isikhunta sezokwelapha sibe yinto ejwayelekile yokuthuthukisa impilo nokuthuthukisa amandla.
Ukuze uhlangabezane nemiphumela egcwele yokusekela impilo ye-fungi yomuthi, izidakamizwa ezifana ne-polysaccharides kumele zikhishwe kuma-mushroom amangqamuzana.
Isizinda se-ultrasonic yindlela ehle kakhulu yokuhlukanisa izinhlanganisela eziphilayo ezivela ku-botanicals, njenge-Reishi, i-Lions Mane, i-Cordyceps, i-Shiitake, iChaga njll.
Isifungi sezokwelapha sezisungulwe isimo sabo njenge-superfood kanye ne-nootropic ngenxa yemiphumela yabo engavamile emisebenzini yokucatshangelwa kanye nesistimu yomzimba. Ngaphandle kwemiphumela yabo yokuthuthukisa impilo nemicabango, amakhowe asebenzisa imithi asetshenziselwa ukuvimbela nokuphatha izifo (isib. Umdlavuza, isifo sikashukela, ukuvuvukala njll). Izinhlobo eziyaziwa kakhulu ze-fungi edlayo yi-Chaga, i-Reishi, i-Lion's Mane, i-Cordyceps, i-Shiitake, ne-Maitake.
Imiphumela yezempilo evelele kakhulu, isikhunta sikhonjiswe ukuthi sikhuphule ukungatheleleki, sikhuphule ukukhula kwenhliziyo (NGF), sithuthukise ukukhuthazela ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba kanye nokuphila isikhathi eside. Ihlanganisela ye-bioactive complements, ebangela imiphumela yokwandisa impilo, ingabe ama-polysaccharides anjengokuthi? -Glucans kanye? -Glucans. Iphrofayili yama-glucans iyahluka phakathi kwezinhlobo ezithile zesikhunta futhi inesibopho sokusetshenziswa okuqondile kwamakhowe ahlukene ukufeza imiphumela ehlukahlukene. Isibonelo, i-Lion's Mane inyusa ukukhula kwe-nerve factor factor (NGF), kanti isikhunta seCordyceps sithuthukisa ukukhuthazela, kanti uReishi usekela amasosha omzimba nokuphila isikhathi eside.
Kungani Ukukhishwa Kwemushroom?
Ukukhishwa kwamakhompiyutha kunenzuzo ngoba izimali ezincane ezidliwe zinemiphumela efana nokuthi uma kunamanzi amaningi amakhompiyutha asetshenzisiwe, okudingekayo ukuthola imiphumela oyifunayo. I-ultrasonically isolated mushroom extracts ikunika zonke izakhi zomzimba ezibalulekile kanye nezinto eziphilayo ezifomathiwe kakhulu!
UP400St for the extraction polysaccharide kusuka fungi
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Polysaccharides
Ukuhlukanisa i-polysaccharides (njenge-alpha-glucans kanye ne-beta-glucans), ama-triterpenes namanye amakhemikhali e-bioactive avela kumakhowe okwelapha, isizinda se-ultrasonic yisindlela esikahle kakhulu, esisebenzayo, esisebenzayo.
Ezinye izingxenye ezizuzisayo ezitholakala kumakhowe amaningi adle yi-selenium, i-vitamin D ne-vitamin B3. Nge-ultrasonication ejulile, izindonga zeseli ze-fungi (ezenziwe nge-chitin) ziyahlanjululwa futhi zenziwe i-lysed ukuze izinhlanganisela zamakhemikhali ezinjenge-polysaccharides, amavithamini njll zikhishwe kwi-solvent ezungezile. Isizinda se-ultrasonic sisebenza kahle ngokukhulula ama-bioactive compounds egcwele ngesikhathi esifushane kakhulu sokuqhathanisa uma kuqhathaniswa namasu okukhishwa kwendabuko.
Emva kokukhipha, ama-bioactive compounds angahlukaniswa futhi ahlanzwe ngokuhlunga, ukucwiliswa kwezidakamizwa / ukuchithwa kwemvula kanye nokwephuza ukuze kulungiswe izicucu ezinamakhowe amakhulu kakhulu. Lezi zikhwama zamakhowe zihanjiswa kamuva emithini, izithako zokudla, izithako zokudla ezisebenzayo, izithako zokugcoba, kanye ne-tonic.
I-Ultrasonic Water noma i-Solvent Extraction
Inzuzo enkulu yesikhumba se ultrasonic yiyona Ukukhetha okubanzi kwe-solvents ukukhetha kusuka. I-Ultrasonically yasiza ukuhlukaniswa kwamakhemikhali amakhemikhali kanye nama-bioactive compounds angenziwa ezinqumeni ezifana namanzi, i-ethanol, i-methanol, i-isopropanol, i-mix / amanzi ethanol, i-glycerine, i-vegetable oil njll.
Ngokuya ngamakhemikhali ahloselwe ukuhlukanisa, isisombululo esisizwa nge-ultrasonically singenziwa emanzini noma e-solvents efana ne-ethanol, i-methanol, i-isopropanol njll. Njengoba amakhowe aqukethe ikakhulukazi okuhloswe ngamanzi ahlangene futhi ahlanganisa izingxenye ezimbalwa ezingezona amanzi ezincibilikisiwe, isakhiwo samanzi ngokuvamile indlela ekhethiwe. Izixazululo ezinamaphesenti aphezulu okuphuza utshwala zisetshenziselwa ukuhlukanisa iziqhumane eziphezulu ema-triterpenes.
SonoStation – uhlelo lwe-ultrasonic olunama-2x 2kW ultrasonicators, i-tank eshukumisayo kanye nepompo – Kuhle kakhulu ukukhishwa kwamanani amaningi.
Izitshalo eziphezulu zekhwalithi egcwele izitshalo
Inqubo emincane, engeyona ye-thermal (ukukhipha okubandayo)
I-Pharma- / ibanga lokudla
Izixazululo ezihlukahlukene ongakhetha kuzo
ephephile & Lula ukusebenza
Imiphumela ye-Ultrasonic Extraction
Imiphakamiso yezinqubo ze-ultrasonic zibalulekile uma kuziwa ekuhlukanisweni nasekutholeni ama-phyto-amakhemikhali. Okokuqala, imingcele ye-ultrasonic efana ne-amplitude, ingcindezi, nokushisa yizici ezibalulekile zokuhlanganisa inqubo yokukhipha ukukhiqizwa okuphezulu nokukhwalithi. Okwesibili, izinqubo ezilawulwa ngokucophelela ziqinisekisa ukuthi okushicilelwe akukonakali yimithelela enamandla kakhulu. Ngokwesibonelo, izinhlanganisela ze-botanical ezifana ne-polysaccharides zijwayele ukulimala uma zibhekene namazinga aphezulu okushisa.
Hielscher Ultrasonics’ ama-extractors angalawulwa kahle – ngokubeka ubukhulu, ukucindezela, izinga lokushisa kuya kwezimo ezifanele. Lokhu kuvumela umphumela we-reproducible, ukukhishwa kwekhwalithi, nokucubungula ukulinganisa.
Ucwaningo (i-Alzorqi et al.) Lubonise ukuthi (1-3; 1-6) -β-d-glucans yama-mushroom aseMalaysia akhishwe yi-ultrasonication anomsebenzi ophakeme we-antioxidant, isisindo esiphezulu se-molecular kanye nesilinganiso esiphezulu se-branching uma siqhathaniswa namacwecwe akhiqizwa ngamasu ajwayelekile okukhipha.
I-Hielscher Ultrasonics ingumkhiqizi osebenza isikhathi eside we-ultrasonicators esebenza kahle, okusetshenziselwa ngempumelelo ukuhlukaniswa kwezakhi eziphilayo ezivela ku-botanicals ne-fungi. Ngomugqa womkhiqizo ohlanganisa uhla oluphelele kusuka kuma-ultrasonicators amancane abanjwe ngezandla kuya kubhentshi-phezulu kanye nezinhlelo zokushayela ezigumbini ezigcwele zezimboni, i-Hielscher Ultrasonics ingumlingani wakho osizayo ekuhlolweni kokuqala kokusebenza kanye nenqubo yokwenza ngcono ekufakweni kokugcina komkhakha wakho wokukhiqiza izimboni . Ukuze ukhulule ama-bioactive compounds kusuka ku-botanicals, ama-amplitudes aphezulu angadingeka – ikakhulukazi lapho izindonga eziqinile zezingqamuzana kufanele zihlanjululwe futhi zifakwe lysed. Ama-processor ultrasonic ama-Hielscher Ultrasonics, isib UIP500hdT noma I-UIP2000hdT, ingasebenzisa ama-amplitudes aphakeme kakhulu angafika ku-200μm. Lawa ma amplitudes aphezulu angasebenza ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7, yebo. Ukuqina kwama-ultrasonicators ama-Hielscher kuqinisekisa ukuqhutshwa kwamahhala okungasebenzi 24/7 emsebenzini obunzima nasezindaweni ezinzima.
okuqinile & Ukugcinwa okuphansi
Ukubonisana & Isevisi
Kulula & ephephile ukusebenza
I-Alzorqi I., Sudheer S., Lu TJ, uManickam S. (2017): I-β-d-glucan ekhishwa ngama-mushroom avela ku-mushroom ehlonyelwe ngokuhlakanipha, izakhiwo zomzimba kanye nomsebenzi we-antioxidant. Ultrasonic Sonochemistry 2017. 531-540.
I-Alzorqi I., Singh A., Manickam S., Al-Qrimli H. (2016): Ukulungiswa kwe-ultrasound isizinda esisiziwe (UAE) se-β-D-glucan polysaccharides kusuka ku-Ganoderma lucidum kulabo abazokwazi ukukala. Izinkampani Zomthombo Wezinsiza 2016.
Khan, AA, Gani A., Masoodi F., Kousar S., Ahmad M. (2014): Izakhiwo ze-β-Glucan ezithathwe yi-β-Glucan Ezikhwameni ezidliwayo Agaricus Bisporus, Pleurotus Ostreatus kanye neCoprinus Atramentarius. Izinqubo zeNgqungquthela Yezizwe Ezingu-8 Zomhlaba Wama-mushroom kanye Nemikhiqizo Ye-Mushroom (ICMBMP8) 2014.
Vardanega R., Santos DT, Meireles MAM (2014): Ukwenyuswa kwamakhemikhali angama-bioactive kusuka kwezitshalo zokwelapha usebenzisa i-ultrasonic irradiation. Umfundisi we-Pharmacogn 2014 Jul-Dec; 8 (16): 88-95.
Isizinda se-ultrasonic ubuchwepheshe obulula, obungabizi, obuphuthumayo futhi obusebenzayo, obuqinisa isisetshenziswa esiqinile-futhi siphumelela amasu okukhishwa kwendabuko. Izinzuzo eziyinhloko ze-ultrasonic eqinile-uketshezi lwamanzi zisekelwe ngokushesha ekukhuleni kinetics nokudluliswa kwenqwaba kanye nokwanda komkhiqizo wokukhipha. Enye inzuzo yithuba lokuqhuba inqubo yesikhumba ezindaweni eziphansi ezivimbela ama-thermo-sensitive compounds ngokumelene nokulimala. Uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokuzihlukanisa ezifana ne-microwave noma i-CO2 ephezulu, umbonisi we-ultrasonic wezindleko eziphansi (kokubili, ukuthenga nokusebenza) kanye nomsebenzisi-friendly futhi ephephile ukusebenza.
Isizinda se-ultrasonic sisekelwe ku-cavitation yama-acoustic namandla ayo we-hydrodynamic shear. Hielscher Ultrasonics’ izinhlelo zakha amagagasi amakhulu e-ultrasonic kanye ne-cavitation ye-extraction yezithombe-amakhemikhali avela ku-botanicals.
i-acoustic cavitation – umphumela wokucubungula kwe-ultrasonic: Uma amagagasi amakhulu e-ultrasonic ehlanganiswa abe yi-medium liquid, ukucindezela nokwandisa imijikelezo kusetshenziselwa uketshezi. Ngesikhathi sokunwetshwa (ukungavamile), ama-bubbles avulekile noma izikhala ezenzeka kulokhu oketshezi. Lezi zibhulabhisi ezivuthayo zidalwa lapho ingcindezi engapheli idlulele ngaphezu kwamandla okuqina oketshezi. Ngaphezu kwemijikelezo ehlukahlukene yokucindezela / ye-rarefaction, ama-bubbles avumayo ayakhula aze afinyelele iphuzu lapho angakwazi ukuthole amandla angaphezulu ukuze aphule ngokweqile (bubble implosion). Phakathi ne-bubble implosion, izimo ezimbi kakhulu ezifana nokushisa okuphezulu kakhulu nokucindezela okuhlukile, ukusakazwa kwamanzi kanye namandla okugcoba kwenzeka endaweni yangakini. Lezi zimbangela ezinamandla ziphula amaseli (emifino kanye nezicubu) ukuze izinto ezingaphakathi kwamaselula (isib. I-polysaccharides, Terpenes, amaprotheni, flavones njll) akhishwa engxenyeni. Inqubo yokwakheka, ukukhula nokuwa kwamabhulabhisi aphefumulayo kuyaziwa ngokuthi cavitation.
I-fungi yigama elibizwa ngokuthi yi-botanical kuwo onke amalunga eqembu lezinto eziphilayo ezinama-eukaryotic ezihlanganisa izinambuzane ezinjengamabele, ukubunjwa, kanye namakhowe. Ikakhulukazi emithi yendabuko (isib. Imithi yama-Asia / yamaShayina), isikhunta sinikezwa ukwenza izinto eziningi ezifana nokuthuthukiswa kwengqondo, ukuzivikela komzimba noma ukufeza isikhathi eside. Namuhla, amakhowe akwelapha awasetshenziswanga nje kuphela njengezinye izidakamizwa kodwa ukukhishwa kwefungi kudliwe njengokudla okusebenzayo noma ukudla okuphezulu. Ngokwesibonelo, isikhunta esinjenge-maitake, cordyceps, umsila we-turkey, i-reishi isetshenziselwa ukusizakala ngomphumela wayo njengama-immunomodulators. Izinhlobo eziningana ze-fungus ezifana namakhowe e-Psilocybin (okubizwa nge-colloquially known as magic mushrooms) asetshenziselwa izakhiwo zawo ze-psychedelic. Amakhowe akuzona izitshalo futhi ahlukaniswa embusweni wefungi.
I-polysaccharides ibalulekile ama-bioactive compounds atholakalayo ku-fungi. Zisetshenziswa njengezinhlanganisela eziphilayo ezisebenzayo zokuphatha imithi kanye ne-nutraceutical, ezinemiphumela emihle njengomthetho wokuzivikela omzimba, ukuguqula noma ukuvimbela umonakalo we-radiation, i-anti-blood coagulation, kanye nemithi elwa nomdlavuza, anti-viral, kanye ne-hypoglycemic. I-polysaccharides etholakala ngesikhunta i-lentinan, i-schizophyllan, ne-krestin yamukelwa njenge-immunoceuticals (izidakamizwa ezenza isimiso somzimba sokuzivikela) eJapane, eKorea naseChina.
Ngaphandle kwe-polysaccharides, i-fungi iqukethe ama-phenols, i-heteropolysaccharides, i-glycogens, amavithamini kanye ne-triterpenes phakathi kwezinye izingxenye ezizuzisayo.
Izidakamizwa zeMushroom zezokwelapha
Ngaphakathi Chaga i-mushroom, eyaziwa nangokuthi Inonotus obliquus noma i-Black Tree Fungus (okubizwa ngokuthi i-cinder conk, i-birch conk, i-clinker polypore), i-polysaccharides iyimithi evelele kakhulu esebenzayo. I-polysaccharides ye-Chaga inomsebenzi onamandla kakhulu we-antioxidant wokuqothula ama-radicals wamahhala.
I-Lion's Mane (I-Hericium erinaceus) yi-mushroom edlayo futhi yokwelapha ehambisana neqembu lezinyosi zezinyo. I-Lion's Mane iyaziwa ngemiphumela yayo ye-neuroprotective ne-nootropic esho ukuthi i-Lion's Mane isetshenziselwa ukuthuthukisa inkumbulo nemisebenzi yokucabangela.
Reishi (I-Ganoderma lucidum, owaziwa nangokuthi iLing Zhi / iLingzhi, i-Mannentake, i-Mushroom ye-Immortality) i-polypore fungus, eyaziwa kalula yi-cap-eqoshiwe, enezinso ezinjengezinso. I-Reishi fungus ikhiqiza iqembu lama-triterpenes okuthiwa i-ganoderic acids. I-Ganoderic acids ibonisa isakhiwo samangqamuzana esifana nesama-hormone e-steroid. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinhlanganisela ezitholakala kuReishi zihlanganisa i-polysaccharides (isib. I-beta-glucan), i-coumarin, i-mannitol, ne-alkaloids. Ama-sterol ahlukaniswe namakhowe afaka i-ganoderol, i-ganoderenic acid, i-ganoderiol, i-ganodermanontriol, i-lucidadiol, ne-ganodermadiol. Kusukela kumbono wokugcoba, uReihi uyaziwa ngokunambitheka kwawo okubabayo futhi kuvame ukudliwa iziphuzo zekhofi.
Shitake (Lentinula edodes; okubizwa nge-colloquially ngokuthi i-Black Forest Tree Mushroom, i-Xiang Gu, i-Mushroom enamafutha) isetshenziswa kakhulu njengesithako emadizeni ase-Asia. Lapho kwenziwa ngezizathu zezempilo, iShiitake iqinisa isimiso somzimba sokuzivikela kanye nemiphumela ekunciphiseni okukhulu kokuvuvukala.
Coriolus versicolor (I-trametes versicolor, Polyporus versicolor; I-colloqu ngokukhethekile ebizwa ngokuthi i-mushroom yomsila waseTurkey, i-Yun Zhi, i-Kawaratake) iqukethe ama-polysaccharides PSK, i-PSP, neKresin kanye nama-glucans we-B-1,3 ne-B-1,4. Ama-polysaccharides asetshenziswa ukwenza ngcono umsebenzi wokuzivikela ezifeni ezigulini ezinomdlavuza othile lapho usetshenziswa kanye ne-chemotherapy. Emithini yendabuko yaseChina, iTurkey Tail isetshenziswa njengethoni.
Cordyceps sinensis (Ophiocordyceps sinensis; owaziwa nangokuthi i-Chinese Caterpillar Fungus, i-Dong Chong Xia Cao, i-yartsa gunbu) ingenye isikhunta esinempahla ehlukile yokulwa ne-antioxidative. I-Cordyceps iqukethe i-antioxidants enamandla eyanciphisa ama-radicals angabonakali mahhala futhi ithuthukise umsebenzi wesistimu yomzimba we-innate antioxidant, futhi.
I-Maitake (Grifola frondosa; I-mushroom yamafu, i-Hui Shu Hua, i-Hen-of-the-wood, ikhanda lenqama, ikhanda lezimvu) liyi-polypore fungus eye yaboniswa ukugqugquzela kokubili amasosha omzimba angasondeli kanye nesistimu yokuvikela omzimba. Ucwaningo lwathola ukuthi i-Maitake ivuselela amasosha omzimba wesiguli somdlavuza webele. Ngaphezu kwalokho, kubonisa imiphumela ye-sugar infringing effect kusukela i-fungus iqukethe i-alpha glucosidase inhibitor.
I-Agaricus subrufescens (owaziwayo ngaphansi kwemigomo Agaricus blazei, Agaricus brasiliensis, i-Agaricus rufotegulis; i-mushroom yama-ammonic colloquially, amakhowe elanga, amakhowa kaNkulunkulu, amakhowe wokuphila, i-royal agaricus, i-jisongrong, noma i-heematsutake) yi-mushroom edlawayo, ebonakala ngokunambitheka kwayo okumnandi kanye nokuphunga kwama-alimondi. I-mushroom ye-Agaricus iyi-fungus eyaziwayo yemithi, ngokuvamile isetshenziselwa ukuzivikela komzimba wayo.